Emily Ratazhkovski - uphawu entsha ubulili of America
Ngubani akazi Emily Ratazhkovski, actress ethandwa futhi oyisibonelo?! Le ntombazane ethambile iminyaka kuphela amabili nantathu, kodwa kakade isibe odumile emhlabeni wonke. Isithombe sakhe lihlotshiswe omagazini ecwebezelayo, ngokuvamile ikhishiwe ngenxa brand abadumile. Isiteshi Nickelodeon abalandeli azi it njengoba Tasha nabalandeli Speed Idethi Enrage Giddy ukubukela ewuchungechunge nge iqhaza lakhe.
Wazalelwa imodeli esizayo nomlingisikazi 7 Juni 1991 e London (eduze Westminster) emndenini British-Polish, kodwa wakhulela eCalifornia (Encinitas). Esengumntwana yena ngokuvamile bashukumiseleka ndawonye nomkhaya wakhe, ngahambisa izincwajana kuso sonke Europe. Babehlala e-Ireland futhi e-Spain.
Nakaseminyakeni umfundi esikoleni, Emily Ratazhkovski esayina inkontileka nomunye ejensi yokumodela. Khona-ke kwadingeka ukuba sihlanganise umsebenzi nge cwaningo esikoleni Los Angeles. Ngemva kokuphothula umatikuletsheni, yangena-University of California-Faculty of Fine Arts. Ngemva kwalokho, wanquma ukuba abe imodeli okhokhelwayo.
Ngo-ejensi yokumodela, Emily uye wasebenza lemikhiqizo ezifana Phakade 21 Nordstom. Yaziwa e ibhizinisi ukumodeliswa walethwa wakhe ukuthatha isithombe nge Toni Dyuranom.
Ngo-2009, Carly Ratazhkovski inkanyezi ochungechungeni TV, lapho wenza indima Tasha. Ngo-2012, yena uvele izimakethe nge S. Underwood, futhi ngo-2013 - kumavidiyo umculo Robin Thicke futhi Maroon. Kwelinye Ukugunda wafika nqunu, ngakho "Youtube" ayengavunyelwe ukubonisa ku-okufushane umnyuziki, kodwa ngokushesha wayeka ukuvimbela.
Emily Ratazhkovski It kwaqala ukuvela topless omagazini ehlukahlukene, kuhlanganise futhi Abaphatha Magazine, futhi GQ. Manje Amy abasha uyaqhubeka esebenza njengesibonelo. Wakhe ababemenyelwe imibukiso ehlukahlukene izinkampani omkhulu ukuthi zihlobene umkhakha yokumodela. Kukhishwe ke nokukhangisa zangaphansi omagazini zabesilisa.
Emily Ratazhkovski. Filmography
Waqala ifilimu career yakhe nge abasha actress izindima usithe kumafilimu iDemo. Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi ukubonile lokhu ifilimu "Ukuphindukuzalwa Andrew" (2004), "Unyaka Emuva Suku" (2005), "Carly" (2009-2010) kanye "yanyamalala" (2014).
Njengoba waqala oyibamba umsebenzi wakhe ngo-2004, u-Emily uyaqhubeka namuhla wakhe.
Photo shoot egijima enqunu
Emily Ratazhkovski kabani ukukhula awunankinga yokwenze ukumodeliswa ibhizinisi (170 cm), uye wasebenza bezithombe enjalo owaziwa, uTony Kelly, Dzhonatan Leder, Chris Heads. Yena isuswe topless ngoba umagazini GQ naseTurkey wathola ngo-2013 isihloko "Umzimba July no-August." Ukuthandwa imodeli abasha alethwe yimpumelelo sokudubula engeli ezibonisa isidumbu sayo yonke inkazimulo yayo. Umfanekiso iqhawe zasendle, lapho Emily yethulwa ngo ijazi noboya, ezigugile eduze kwesikhumba, i-magazini Galoremag okubangelwa komsindo. Wona lo magazini nangezibonelo ohlangothini eqinile le ntombazane, okubonisa umfundi isithombe Emily Ratazhkovski esiyingini isibhakela. Lapha alunguza olubabazeka kakhulu, nakuba ayengazi flutters like uvemvane.
actress Young kodwa ethandwa futhi imodeli Emily kwenza izinhliziyo beat ngokushesha. It has idatha kakhulu, okufanele imodeli kanye Ubumnene wakhe hot kusiza afinyelele imigomo.
It kuyabonakala ku amahlumela isithombe brand imfashini nomagazini. Ngokwesibonelo, i-Rad and Bone, yena okunenkanyezi ifulethi awunalutho. Ngakho-ke wabonisa amakghonwabo. Emmy ibhulogi yakho ku-Instagram, lapho ngezinye izikhathi ubeka izithombe zakho. Yena izinkanyezi ku "Entourage" movie, okuzokwenza kube yeshashalazi 2015.
Emily uthi impilo yakhe iyashintsha, ukuthi ufuna ukuba esithombeni. Ziba Amatshwayo isikhathi esisha. Ngaphezu kwalokho, yena unezinto ezinkulu kabi esikhathini esizayo. Ezinye izincwadi bathini mayelana nokushintsha uphawu ubulili Melika nge Angiolini Jolie Emily Ratazhkovski.
imodeli Young ukubukeka ebukekayo uwina izinhliziyo. Samenyelwa ukudubula bezithombe abadumile, izincwadi athandwayo kanye brand. Yena ngokuvamile itholakala ku izembozo zomagazini ecwebezelayo, futhi izithombe ezithathwe kule minyaka yamuva, bakhangwa amehlo abaningi, njengoba wathwebula egijima enqunu. Abalandeli zilindele ngokulangazela entsha amahlumela isithombe nama-movie ne iqhaza lakhe.
Izipikha ithelevishini KwabaseSoviet Kwakugxile Khona - engcebweni isiko kazwelonke
U-Aleksey Sukhanov: Biography, umkhaya nokuphila kwangasese (isithombe)
Isiteshi TV "TV Game": ukuthi ungasetha kanjani? Kuyini lokhu?
Imisipha senhliziyo - izici yokwakheka bokuphila
Kungenzeka yini ukuba ukuyikhipha izinwele kusukela imvukuzane? Kungani nezimvukuzane ukhule izinwele
"Javelin" - isikhali esizayo. Missile "Javelin"
Sezinso Laparoscopy: inkathi nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa, ekudleni, imiphumela
IsiKhumbuzo uhlamvu 2 ruble eRussia